Laydhka & Qalabka
Kuwa Siraad Sita
Meelaha Diinteena Baska
Tweezers & Maqas
Qabatooyin Abeesooyin & Murriyado
2021 Waxyaabaha Cusub ee Xilliga Koowaad
Waa kuwan alaabooyinka cusub ee la bilaabay xilligii ugu horreeyay, haddii ay jiraan wax aad jeceshahay, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Sanduuqan taranka taranka ee loo yaqaan 'magnetic acrylic acrylic' wuxuu ka samaysan yahay maadooyin tayo sare leh oo tayo sare leh, hufnaan sare leh, 360 digrii aragti buuxa oo muuqaal ahaan gebi ahaanba hufan, ...
Nofeembar 20 ~ 23rd, Nomoypet wuxuu kaqeyb galay 23rd Shiinaha Caalamiga ah ee Xayawaanka (CIPS 2019) ee Shanghai. Waxaan ku guuleysanay horumar ballaaran xagga kharashka suuqa, dhiirrigelinta wax soo saarka, wada-hawlgalayaasha isgaarsiinta iyo dhismaha muuqaalka iyada oo loo marayo bandhiggan. CIPS waa hal iyo kaliya B2B warshadaha xayawaanka caalamiga ...
Dejinta Habboonaanta Habboon ee Xamaarato
Markaad guri u abuureyso saaxiibkaaga cusub ee reptilian waxaa muhiim ah in terrarium-kaaga uusan u ekaan uun sida deegaankaaga dabiiciga ah ee xamaarato, waxay kaloo u dhaqantaa sida oo kale. Xayawaanku wuxuu leeyahay baahiyo noolaha qaarkood, tilmaantan ayaa kaa caawin doonta inaad dejiso deegaan daboolaya baahiyahaas. Aynu helno ...
Doorashada Xayawaanka Xamaarato ah
Xamaarato waa xayawaan caan ah sababo badan awgood, dhammaantoodna aan ku habboonayn. Dadka qaarkiis waxay jecel yihiin inay yeeshaan xayawaan u gaar ah sida xamaarato. Qaarkood waxay si qalad ah u aaminsan yihiin in kharashka daryeelka caafimaadka xoolaha uu ka hooseeyo xayawaanka xamaaratada ah marka loo eego kan eyda iyo bisadaha. Dad badan oo aan haysan waqti ay ugu deeqaan d ...
Nofeembar 20 ~ 23rd, Nomoypet wuxuu kaqeyb galay 23rd Shiinaha Caalamiga ah ee Xayawaanka (CIPS 2019) ee Shanghai. Waxaan ku guuleysanay horumar ballaaran xagga kharashka suuqa, dhiirrigelinta wax soo saarka, wada-hawlgalayaasha isgaarsiinta iyo dhismaha muuqaalka iyada oo loo marayo bandhiggan. Waxaan soo bandhignay taxanaheena taxanaha badan oo ay ka mid yihiin ...
Cinwaanka: Jiaxing Nomoy Butros Products Co., Ltd.